Kooxo hubaysan xalay deegaanka Siinay ee u dhaxeeya Magaalada Marka iyo Deegaanka Shalaanbood ay ku dileen 7 ruux – STAR FM SOMALIA
Dhacdo xanuun badan ayaa waxa ay ka dhacday Gobolka Shabelaha hoose, kadib markii Kooxo hubaysan xalay deegaanka Siinay ee u dhaxeeya Magaalada Marka iyo Deegaanka Shalaanbood ay ku dileen 7 ruux.
Dadka la dilay ayaa waxa ay kala ahaayeen Lix caruur ah iyo Ayeeydood oo lagu magacaabi jiray Khadiija Nuur Maxamed, waxaana lagu weeraray gurigooda oo deegaanka Siinaay ku yaal, iyadoo weerarkaasi ay ka badbaaday Hooyada dhashay caruurta la laayay.
Kooxaha hubaysan ayaa dadkaan ku dilay rasaas xoogan oo ay ku fureen, kadibna waxa ay dab qabadsiiyeen aqalkii ay deganaayeen reerka la dilay, iyadoo sidoo kale Kooxaha hubaysan ay halkaasi ku laayeen Xoolo ay reerkaasi lahaayeen.
Amuurtaan ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen inay tahay arin naxdin badan, maadaama dadka la dilay ay ahaayeen hal qoys oo hal guri deganaa, kuwaasi oo masiibadan xalay ay qabsatay.
Ruux ka mid ah ehelka dadkaasi lalaayey ayaa uga waramay arintaan starfm sababta loo dilay dadkaan inay tahay arimo ku aadan dhanka Qabaa’ilka maadaama Gobolka Shabelaha hoose deegaano ka tirsan ay jiraan beegsi dhanka qabiilka ah oo ay isku hayaan labo beelood oo halkaasi wada daga.
Dhacdadan oo dhacday xalay 11:00 Habeenimo ayaa la sheegayaa ragii ka dambeeyay inay halkaasi si nabadgelyo ah uga baxsadeen, waxaana arintaan ay tahay mid masiibo ah.
Saaka ayaa lagu wadaa in lagu aaso dadkaan meydkooda Deegaanka dhacdada ay ka dhacday ee Siinaay, halkaasi oo ay daganaayeen Lixda caruurta ah iyo Ayeeydood ee la laayay.
Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Shabelaha hoose, ayaa lagu dhaliilaa inaysan waxba ka qaban dilalka qorsheysan ee salka ku haayo arimaha Qabiilka ee Gobolkaasi sida xun uga dhaca.
Dowladda Masar oo boqolaal Tahriibayaal ku xirtay magaalada Alexandaria